Ex: Faroole oo Sheegay in Soomaliya Aysan Laheyn Xiligaan Wax Madaxweyne La Yiraahdo
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland ayaa sheegay in soomaliya aysan laheyn xiligaan wax madaxweyne la yiraahdo islamarkaana uu waqtigiisa sharciga ah dhameystay Xasan Shiikh Maxamuud.
Siyaasiga Dr. C/raxmaan Max’ed Max’uud (Faroole) oo ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada xilka Madaxweynaha Somalia ayaa ay xusay in Madaxweyne Xasan Shiikh looga baahan yahay inuu maanta baneeyo xafiiska.
Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. C/raxmaan Max’ed Max’uud (Faroole) ayaa ku tilmaamay afartii sano ee uu madaxweyn Xasan xilka hayey afar sano oo khasaartay.
“Mudadii afarta sano aheyd ee uu Xasan Shiikh Max’uud xafiiska joogay waxay ahayd afar sano oo NGO ah, bililiqo ah, laguna khasaaray, wax macno leh oo uu qabtayna aysan jirin, waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan jirin wax talaabo oo ka hirgalay arrimihii doorashooyinka, waxaana idiin muuqata in meesha muddo kororsi dadban uu ka socdo” ayuu yiri Faroole.
Dhinaca kale, Dr. Faroole ayaa soo hadal qaaday xirnaanshaha jidadka Muqdisho iyo shirka madaxda IGAD, waxaana uu sheegay iney wax laga xumaado tahay dhibaatada ka taagan magaalada Muqdisho gaar ahaan wax uu ku tilmaamay cuno qabataynta shacabka lagusoo rogay ee looga xiray jidadka.
“Waa nasiib darro in Shir IGAD ku qabsanayso Xamar dartiis loo ciqaabo shacabka Soomaaliyeed, cuqubadaas shacabka laga galayo waxay ku soo noqon doontaa kuwo godobtaas galay, waadna ogtihiin waa xilli Carafo oo dadku doonayaan inay is dhexmaraan oo suuqyada ka soo adeegtaan,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Faroole.